मेयर/उपमेयर भारत जाँदा नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा ! – Jaljala Online
सुजना ढकाल काठमाडौं, माघ २८
नगरपालिकाका अधिकृत शिवराम अधिकारीले माघ २४ गते सूचना निकालेर सोमबार बिदा दिने उल्लेख गरेका थिए।
‘सूचनामा मेयर/उपमेयर भारत जाने दिन बिदा दिइने उल्लेख छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘तर त्यही प्रयोजनका लागि बिदा दिइएको छ।’
‘कहिले बैठक बस्यो र बिदा दिने निर्णय गर्‍यो हामीलाई केही थाहा छैन,’ वडाध्यक्ष लोहनीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘एक महिनापछि आउने स्थापना दिवसको बिदा एक महिनाअघि नै दिनु व्यवहारिक पनि होइन।’
माघ १९ गतेदेखि २५ गतेसम्म तपाइको भाग्यफल कस्तो छ ? साप्ताहिक राशिफल हेर्नुस मेष -प्रारम्भमा रमाइलो पारिवारिक जमघट हुनेछ। ज्ञानले व्यक्तित्व निखार्ने अवसर जुट्नेछ। इच्छाशक्ति बढ्नाले महत्त्वाकांक्षी काम सुरु हुनेछ। सोमवार र मंगलवार मित्रहरूको सहयोगले हौसला प्रदान गर्नेछ। आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या र धन आर्जन हुनेछ। इच्छाशक्ति […]
दसैंमा विदेशबाट फर्कँदा केके ल्याउन पाइन्छ ? कति लाग्छ भन्सार ? थाहा पाउनुहोस्
असोज ८, काठमाडौं । तपाईं वैदेशिक रोजगारीबाट दशैँमा घर फर्कँदा आफूलाई आवश्यक र मन परेका सामग्री लिएर फर्कँदै हुनुहुन्छ? यदि हो भने त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुनकुन सामग्री बिना भन्सार ल्याउन पाइन्छ भनेर बुझ्दा सजिलो पर्छ। यसका साथै कुन सामानमा ल्याउन कति भन्सार लाग्छ भन्ने पनि बुझ्नुभयो भने अझ सहज हुन्छ। यो खबर निर्मला घिमिरेले नेपाललाइभमा […]